UDon Lemon, uCandace Owens Uphendule kuDave Chappelle Ebabiza ngo-8: 46 - Inkcubeko Yopopu
UDon Lemon kunye noCandace Owens Baphendula kuDave Chappelle Ukubabiza kwiNetflix Comedy Special 8:46
Ividiyo kude CNN
kutheni umnwe ophakathi umnwe ombi
Igama likaDave Chappelle-lilahle amagama ambalwa eHollywood kuye Yothusa iNetflix yomdlalo okhethekileyo , 8:46 , apho wayethetha ngokusweleka kukaGeorge Floyd. Ngoku, abantu ababini athe wabakhankanya, uDon Lemon kunye noCandace Owens, baphendule.
Ndiwongekile ukuba ndikhunjulwe kwi-Dave Chappelle ekhethekileyo, utshilo uLemon CNN malunga nokuphendula kwakhe kukuma. Into endizokuyithetha kukuba ndiyavumelana noDave Chapelle. Ndiyavuma — ndicinga ukuba eli ziko belisemva kakhulu… Ndicinga ukuba abantu abatsha abalapha esitratweni abayikhathalelanga into esiza kuyithetha. Bacinga ukuba inxenye yomhlaba esiyenzileyo noko sikwenzileyo, mhlawumbi asikhange sihambe ngokukhawuleza ngokwaneleyo, besingenamandla ngokwaneleyo. Ke baphume besiya kulwa.
Uqhubeke, Bathe mamela, sikhathele yile yenzekayo. Sizamile ukuyenza kakuhle, sazama ukuyenza ngoxolo, sizamile ukuzenza zonke ezi zinto kwaye uyalile. Ke abathethi kuphela kubantu abamhlophe kweli lizwe kodwa nakuthi sonke, sonke kwindawo esekiweyo.
Kodwa ndicinga ukuba eli ayiloxesha lokuthozama. Ndicinga ukuba lo ngumzuzu wokuba sonke sisebenzise amaqonga ethu ukwenza nantoni na esinokuyenza, kwaye ubuncinci ukubonisa abantu abancinci nabantu phaya ukuba siyabaxhasa. Kwaye oko akuthethi ukuthatha lonke ikhredithi kuyo okanye ukubathethela. Ndicinga ukuba bangayenza ngokwabo-ndicinga ukuba injalo ngokuchanekileyo, ukuba kufuneka bazi ukuba abantu abanjengoDave Chappelle, njengam okanye nabani na obaxhasayo. Kwaye konke oko bafuna ukukwazi.
I-Lemon yaphela, Kodwa isigqebelo kukuba [Chappelles] ekhethekileyo ibizwa ngokuba 8:46. Uthetha ngalo mbandela kwaye ndicinga ukuba mkhulu. Usebenzisa iqonga lakhe ukuthetha ngale ndlela anokuthi ayenze.
Kwizinto ezizodwa, uChappelle ubize iLamuni ngegama, esithi, Ndijonge uDon Lemon… uthi, Baphi aba bantu badumileyo. Kutheni ungathethi nje? Ngaba ibalulekile into yodumo? Hayi ezi zizitalato ziyazithethela. Abandifuni ngoku.
U-Owens uphendule kuChappelle, owagxibha u-Owens ngokukhethekileyo ngempendulo yakhe ekubulaweni kuka-Floyds.
Ndibone uCandace Owens ezama ukweyisela uMhlophe waseMelika, ungakhathazeki malunga nokuba ulwaphulo-mthetho, uChappelle waqhekeka ngexesha lokuma kwakhe. Andikuniki into eyenziwe yile nigga ... andikhathali nokuba yena ukhahlele uCandace Owens kwindawo yakhe enukayo. Andazi ukuba iyanuka, kodwa ndiyacinga ukuba iyanuka. Ukuba ndithe ndafumanisa ukuba ndiza kukwazisa ngokuqinisekileyo, ndiza kuxela njengo-Azealia Banks, ndiza kukuxelela.
Kubonakala ukuba, u-Owens wathatha i-jabs kwi-chin. Uphendule kwibanter ngeTwitter, ebhala, Andiyiyo inxele. Ndinoburharha & amp; Ndicinga ukuba abahlekisi KUFUNEKA bahlekise ngabantu. Uqhubeke, uDave Chappelle ngomnye wabahlekisi ababalaseleyo ngalo lonke ixesha kwaye ndenza enye yeengcali zakhe. YIMANDLA leyo!
Kuwo onke amaDemokhrasi ukuthumela i-clip ye #DaveChappelle ukundithuka:
Andinguye osekhohlo. Ndinoburharha & amp; Ndicinga ukuba abahlekisi KUFUNEKA bahlekise ngabantu.
UDave Chappelle ngomnye wabahlekisi ababalaseleyo ngalo lonke ixesha kwaye ndiyenze yaba yenye yeengcali zakhe.
-Candace Owens (@RealCandaceO) Isilimela 12, 2020
Sifikile ngequbuliso kwinkcubeko apho abantu bangazihlekisi, okanye bafuna ukubathintela abahlekisi.
Andisoze ndibayinxalenye yelo siko. @DaveChappelle -Ungumlandeli kunye no-Id bayathanda ukudibana nawe kwaye bakucelomngeni ukuba uthethe nantoni na ebusweni bam!
indlela yokunxiba imikhosi ephezulu yomoya
umnxeba womsebenzi iziporho michael myers
Iijordani kwilokhwe ye-ross encinci